Izindlela ezintathu ezilula zokuqala ukuqapha umkhiqizo wakho online | Martech Zone
Uma ngabe ubulandela izitayela zemidiya yokuxhumana nabantu, kungenzeka ukuthi uzwile okuningi ngokujoyina "ingxoxo" nokuthi ungabamba iqhaza kanjani. Kungenzeka futhi ukuthi usizwile isexwayiso esithi: "abantu bakhuluma ngenkampani yakho noma ngabe ukhona noma cha". Lokhu kuyiqiniso impela futhi kuyisizathu esihle sokugxumela ezinkundleni zokuxhumana bese uqala ukubamba iqhaza. Uma uyingxenye yengxoxo, ungaphendula imibuzo, wenze ukulimala, futhi unikeze insizakalo yamakhasimende engcono.
Ngakho-ke sihambisana kanjani nazo zonke izingxoxo? Nazi izinto ezintathu ongazisetha ngemizuzu embalwa ukuqala ukuqapha izingxoxo mayelana nomkhiqizo wakho.
Sebenzisa Izaziso zeGoogle Lokhu kungenzeka kungenye yamathuluzi alula kepha asebenza kakhulu atholakalayo ekuqapheni umkhiqizo. Izaziso zeGoogle zikuvumela ukuthi wakhe izexwayiso ezithile zamagama asemqoka ezizokuthumela i-imeyili isikhathi ngasinye lapho okuqukethwe kuvela kuwebhu okuqukethe lawo magama angukhiye.
Njengoba igama lenkampani yami iSpinWeb, nginesexwayiso esimiselwe ukuqapha igama elithi "SpinWeb", okusho ukuthi ngithola ama-imeyili njalo lapho inkampani yami kukhulunywa ngayo kuwebhu.
Setha izexwayiso ku-TweetBeep. I-TweetBeep iyisevisi yamahhala (kuze kube nezixwayiso ezifika kwezili-10) eziqapha izingxoxo ku-Twitter bese zikuthumela ama-imeyili afaka kuhlu wonke ama-tweets aqukethe igama lakho elingukhiye. Isaziso esisethelwe i- “SpinWeb” singithumela i-imeyili yansuku zonke (noma ngehora, uma ngithanda) equkethe wonke ama-tweets akhuluma ngenkampani yami.
Lokhu kwenza kube lula kimi ukuthi ngikhethe ukungena ezingxoxweni ezingithandayo.
Skena amanethiwekhi omphakathi nge I-SocialMention. Le sevisi ilandelela amanethiwekhi omphakathi angaphezu kwama-80 ngegama lakho elingukhiye, kufaka phakathi i-Twitter, i-Facebook, i-FriendFeed, i-Youtube, i-Digg, i-Google, njll.
Uma ufuna indlela elula kakhulu yokuqalisa ngokuqapha umkhiqizo ngemidiya yezokuxhumana, ukuchitha imizuzu embalwa usetha la mathuluzi amathathu kuyindawo enhle yokuqala. Izokwenza imizamo yakho isebenze futhi ikugcine waziswa ngalokho okushiwoyo ngenkampani yakho. Uzothola nokuthi buqinisa ubudlelwano bakho obuku-inthanethi ngoba uyakwazi ukubamba iqhaza ngenkuthalo noma nini lapho umuntu ekhuluma ngawe, futhi lokho kuyinsizakalo enkulu yamakhasimende.
Tags: ukuqapha umkhiqizoizaziso zeGoogleukuqaphaizexwayiso zomphakathiukukhuluma ngomphakathiukuqapha komphakathi
Jan 24, 2010 ngo-2: 48 PM
Okuthunyelwe okuhle, Michael!
Ukuqapha kungukuvela komkhakha wezokuxhumana. Ukulalela bekuyisinyathelo sokuqala, kepha akusenele. Ukubandakanya kuyadingeka. Ngokuya ngokuthi izidingo zakho zokuqapha nokuzibandakanya ziyini, amathuluzi angenhla angahle asebenze, noma ungadinga ukuya kusixazululo somthwalo osindayo. Uma unethuba, sicela uhlole ithuluzi le-Community Insights kusuka ku-Biz360 - indlela enhle yokuqapha, ukuthola ukuthi imithombo yezingxoxo enamandla kangakanani, ukuze ukwazi ukubandakanya, futhi udlulisele imisebenzi yokubandakanya kwabanye enkampanini yakho (socialCRM ). Zizwe ukhululekile ukungibamba noma kunini.
mogneva (at) biz360 (ichashazi) com